Photoshop Plugins ee lagu taliyay | Hal-abuurka khadka tooska ah
Iris Gamen | 07/05/2022 12:11 | La cusbooneysiiyay 09/05/2022 16:11 | dhowr
Daabacaadda aad akhrinayso, waxaad ku ogaan doontaa waxa ku jira Inta badan lagu taliyay Adobe Photoshop Plugins, Waxaan ka hadli doonaa oo ku saabsan plugins lacag la'aan iyo lacag la'aan labadaba.
Plugins ee barnaamijkan tafatirka waa a doorasho aad u wanaagsan haddii aan rabno inaan horumarino oo aan la qabsanno khibradeena naqshadeeyayaasha. Waxyaabahani waxay leeyihiin shaqada furitaanka oo noo ogolaanaya inaan isticmaalno hawlo cusub, naga badbaadi waqti iyo xitaa ikhtiyaarka hagaajinta wax soo saarkeena.
Adobe Photoshop, ayaa noqday mid ka mid ah barnaamijyada lagama maarmaanka ah ma aha oo kaliya naqshadeeyayaasha laakiin xirfadlayaasha ka socda qaybaha kale taas oo isticmaalka qalabkan hal-abuurka ah uu lagama maarmaan u yahay, marka lagu daro, waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah barnaamijyada tafatirka ugu fiican.
1 Plugins: waa maxay iyo waxa loogu talagalay?
2 Plugin-yada ugu talinayaa Photoshop
2.2 Xirmada Bulshada
2.3 Saamaynta B&W
2.5 Dhimista qaylada xadka ee Freeware
2.7 Ururinta Nik
2.8 Soo -gaadhista X7
2.11 Kaamirada RAW
2.12 Xakamaynta Jiifta 2
Plugins: waa maxay iyo waxa loogu talagalay?
Plugin ama filtar, waa a curiye ka dhex shaqeeya Photoshop oo barnaamijka ku soo kordhiya astaamo cusub. Waxa ay la mid tahay in aad si joogto ah u leedahay awoodo cusub.
Sida caadiga ah, ka dib marka la rakibo waxay ka soo muuqan doonaan ikhtiyaarka shaandhada ee menu-ka, inkastoo xaaladaha qaarkood, ku xiran tahay nooca, waxay ku jiri karaan gudaha ikhtiyaarka kordhinta.
Marka aynu ogaano waxa ay yihiin curiyayaashan, waa in aan ogaano waxa shaqadoodu tahay, waxa ay yihiin. Dhab ahaantii filtarradan waxaa loo isticmaalaa ku dhawaad ​​wax kasta, inta badan shaqadeedu waa inay u adeegto sidii tifaftirayaasha garaafyada yar oo ku daraya shaandhooyin gaar ah.
Marka la dooranayo mid ka mid ah plugins-kaas, barnaamijka tafatirka Photoshop wuxuu furi doonaa daaqad iyo waxay ku dari doontaa saamayntan lakabka hadda jira, marka aan dhameyno, barnaamijku wuxuu ina tusi doonaa sida ay natiijadu u dhacday.
Plugin-yada ugu talinayaa Photoshop
Waxaa jira tiro badan oo plugins ah tayo aad u wanaagsan, iyo sidoo kale faa'iido leh in la soo dejiyo laguna isticmaalo Photoshop, qaar badan oo ka mid ah waxaad ka heli kartaa bilaash ama qiimo jaban.
Qaybtan, waxaan kuugu dayn a ku qor isku-dar waxa aan aaminsanahay inay yihiin kuwa ugu badan ee lagu taliyay Photoshop plugins bilaash iyo qiimo dhexdhexaad ah labadaba.
plugin aad u fudud, kaas oo kuu ogolaanaya ku dar saamaynta iftiinka sawirada aad la shaqaynayso. Waxaad ka abuuri kartaa iftiinka wakhtiga saxda ah, ilaa mid jihada ah. Intaa waxaa dheer in aad awood u leedahay inaad beddesho xuduudaha si aad ugu hagaajiso baahiyahaaga.
plugin ah in xallin doona shakigaada ku saabsan waxa xallinta waa in aad geliso sawiradaada shabakadaha bulshada ama mareegaha kale. Qalabka Bulshada, oo qiimihiisu ka yar yahay toban euro, wuxuu kuu abuuraa habab kala duwan si aad sawiradaada ugu darto shabakada bulshada ee aad dooratay.
Waxaan ka hadleynaa plugin lagama maarmaanka u ah Photoshop qof kasta oo jecel tafatirka sawirka. Waxay ku saabsan tahay a shaandhada madow iyo caddaanka leh oo dhammaystiran runtii cajiib ah.
Si aad u hesho saameyn dhab ah oo wanaagsan, waxay isticmaashaa mashiinka beddelka madow iyo caddaanka ah, kaas oo waxay kordhisaa codka iyo dhadhanka si loo dhammeeyo sameynta sawirada qaabkan soo jiidashada dareenka.
Loo tilmaamay qof kasta xiiseeya ama u heellan horumarinta shabakadda. Plugin-gani aad buu faa'iido u leeyahay maadaama uu lakabyada barnaamijka tafatirka u beddelayo CSS3. Kaliya waa inaad gujisaa astaanta magaca CSS3P, lakabyadaadana waxa loo rogi doonaa CSS3.
Doorashadan, aqbal hawlo kala duwan sida xulashada lakabka badan, horgalayaasha iibiyaha, cabbirada, istaroogga, iwm. Maxaa kaa dhigaya a qalab runtii waxtar leh.
Dhimista qaylada xadka ee Freeware
Sida magaceeda ka muuqata, waa plugin diiradda saara dhimista qaylada sawirradeenna oo bixiya natiijooyin aad u wanaagsan. Haddii aan rabno inaan helno plugin tayo sare leh marka la eego ka saarista buuqa, waa inaan aadnaa xulashooyinka lacag bixinta oo si daacad ah, ma aha kuwo aad u jaban.
Haddii aad raadineyso u beddel hal-abuurkaaga Adobe Photoshop ka qaybgal firfircoon, Pluginkani waa kan adiga. Si aad awood ugu yeelatid inaad la shaqeyso, waa inaad dhoofisaa sabuuradahaaga farshaxanka, waxaad ku dari kartaa animations, sawirro kale ama xitaa cod. Markaad dhammayso, dhoofinta waxay kuxirantahay dhexdhexaadinta aad ku shaqeyneyso, Youtube, Vimeo, MP4, iwm.
Xirmo plugin oo aad u xiiso badan oo loogu talagalay Photoshop. Markii hore waxay ka tirsan yihiin Google, laakiin way joojiyeen cusbooneysiintooda, in muddo ah DxO ayaa qabsaday oo dib u soo nooleeyay.
Xidhmadan gudaheeda, waxaad ka heli kartaa sideed barnaamij software, oo lagu daray 250 presets iyo farsamada U Point isku dhafan oo aan awood u yeelan doono inaan sahaminno mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah dhinacyada ka kooban sawir-qaadista.
Soo -gaadhista X7
Mid kale oo ka mid ah plugins-ka lagu taliyey ee Photoshop, xagga tafatirka iyo hagaajinta sawirrada. ExposureX7, isku dara goobo sawiro xirfadeed oo kala duwan iyo buug weyn oo muuqaal sawireed, marka lagu daro haysashada naqshad hufan oo aad u fudud in la isticmaalo.
Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadleynaa plugin ah in aad soo bandhigaysaa la suurtogalnimada in aad awood u leedahay in aad wax ka beddesho nalalka iyo hadhyada ee sawirada aad ku shaqaynayso, dhamaantood si loo hagaajiyo midabka ugu dambeeya.
Naqshadeeye kasta oo mareegaha ah waa inuu ogaadaa oo isticmaalo plugin-kan Photoshop oo aad awooddo samee majaajilo mareegaha. WebZap waxa ay ku siinaysaa habab kala duwan oo naqshadaysan iyo sidoo kale hagayaal aad isticmaali doonto si aad u abuurto menu-yada, daaqadaha, qaybaha, iwm.
Loo tilmaamay xirfadlayaasha sawir-qaadista, plugin-kan ayaa u oggolaan doona inay shaqee oo wax ka beddel abuurkaaga sida ay uga soo baxayaan kamaradaada. Waxay ku shaqeyn doonaan sawirro cayriin ah, samaynta hagaajin kala duwan sida dhalaalka, isbarbardhigga ama dheelitirka cad iyada oo aan la beddelin sawirka asalka ah.
Xakamaynta Jiifta 2
Hubaal wax ka badan hal mar markaad wax ka qabanayso mashruuca naqshadaynta ballaaran, lakabyadaadu waxay ka tageen wax badan oo la rabo oo waxaad ku waalantay raadinta walxaha qaarkood. Mar dambe dan kama gelin, Layrs Control 2 waa plugin loogu talagalay Photoshop kaas oo hagaajin doona maaraynta lakabyada, taas oo ah, waxay kaa caawin doontaa abaabulka, samaynta habka shaqada mid raaxo leh oo degdeg ah.
Sidaad aragteen, waxaa jira noocyo kala duwan oo ah plugins aad waxtar u leh oo loo heli karo Photoshop. Haddii aad ogtahay wax dheeraad ah oo aad jeclaan lahayd inaad ku taliso, ha ka waaban inaad faallo nooga tagto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » plugins Photoshop lagu taliyay